Dhageyso:-Waa sidee xaalada Caafimaad Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya? - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Dhageyso:-Waa sidee xaalada Caafimaad Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya?
Dhageyso:-Waa sidee xaalada Caafimaad Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya?
Waxaa saacadihii lasoo dhaafay soo baxay warar sheegaya in uu magaalada London ee dalka Britain ku xanuunsan yahay ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, Nuur Xassan Xusseen (Nuur Cadde).
Wiil uu dhalay Nuur Cadde oo lagu magacaabo Xaaji Maxamed Nuur Cade ayaa xaqiijiyay in aabihii uu ku jiro isbitaal ku yaala magaalada London, halkaasina lagu dabiibayo, kadib markii sida uu sheegay uu ku dhacay xanuunka dunida oo dhan aafeeyay ee corona.
“Xaaladda ra’iisul wasaare Nuur Cadde aad ayay u wanaagsan tahay, waxaan filayaa in bulshada Soomaaliyeed ay la socoto in uu xanuunsan yahay oo isbitaal ku yaala London uu ku jiro, halkaasina lagu daweynayo, xaaladiisana waa ay degan tahay hadda, London ayuu degan yahay, waxaana halkaas ku qabsaday feyraska corona”, ayuu yiri wiilka Nuur Cadde.
Wuxuu intaa ku daray in xaaladiisa ay kasoo reyneyso, sababta isbitaalka loo geeyayna ay tahay in uu qabo xanuuno ay kamid yihiin macaankaa ama sonkorta, waxaana uu yiri “sideed maalmood kahor ayaa lagu arkay xanuunka”.
Wuxuu sidoo kale ka hadlay warar been abuur ah oo saacadihii lasoo dhaafay lagu soo qoray baraha bulshada, kuwaas oo uu sheegay in aysan waxba ka jirin.
Previous articleDhageyso:-Warka Subax ee Radio Risaala 27-03-2020
Next articleTirada Soomaalida Cudurka COVID 19 ugu geeriyootey Ingiriiska oo la shaaciyey